Allgedo.com » 2012 » September » 12
Home » Archive Daily September 12th, 2012
Assalaamu Calaykum. Waad salaaman tihiin dhamaan walaalaha qeymaha badan ee ku xiran websitekan qaayaha badan. By Adam Abdi Abuzuhri abuzuhri1@gmail.com ————————— Maanta iyo maqaalkeena, wuxuu ku saabsan yahay safar 2 bilood ah oo aan ku tagay wadanka Kenya 12 sano kadib. Kenya iyo xaaladeeda, waxaad kala socotaan Televisionada Soomaalida oo...
Jaaliyaadda reer Puntland ee dalka Cumaan oo hambalyo u direysa madaxweyne Prof. Xasan Sheekh Maxamuud
Gudiga jaaliyadd Puntland ee Cumaan waxay hanbaalyo u dirayaan madaxewayha jamhuryadda Soomaaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud. Gudiga jalliyadda puntland ee Cumaan waxay ka codsaneysaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel ay joogtaba in laala shaqeeyo ila markaana taageera buuxda la siiyo madaxweyha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaan nahay jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan...
PRESS RELEASE: AMISOM foils attack on Somali President
Mogadishu – September 12th, 2012; AMISOM and Somali security forces have this afternoon foiled an attack against Somalia’s new President in Mogadishu. Two suicide bombers were shot and blew up as they attempted to penetrate the hotel where President Hassan Sheikh Mohamud has been staying since his election on Monday. Another was intercepted and shot dead as he attempted to scale the walls of the...
Madaxweynaha dalka oo cambaareeyay qaraxyadii maanta (War-saxaafadeed)
Mogadishu, Somalia, Sep. 12, 2012) Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay qaraxyadii ay maanta ciidamada dowladdu fashiliyeen ee ay maleeshiyaadka Shabaab ku qaadeen hoteelkii uu degganaa, isago sheegay inaysan saameyn ku yeelan doonin ficillada noocaan ah howsha qaran ee ay masuuliyiinta dowladdu u hayaan shacabka. Isagoo ku sugan madaxtooyada...
Isbaheysiga Turxaanbixinta IFISO oo u Hambelyeynaya Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya
War-saxaafadeed:- September 12, 2012, Isbaheysiga Madaxabannaan ee turxaan bixinta Soomaaliya (IFISO) ayaa ugu hambalyeynaya Xasan Shiikh Maxamuud doorashada uu maalintii Isniinta Barlamaanku ugu doortay in uu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya. IFISO oo tixgalineysa fursadda taariikhiga ah ee aan caadiga aheyn ee la siiyay Xukuumadda Federalka ah ee Soomaaliya ayaa ku borrineysa in la soo afjaro taariikhda...
Gudoomiyaha baarklamaanka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday maalinta loo caleema saaraayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay waqtiga ay dhaceyso xaflada caleema saarka Madaxweynaha Cusub iyo waliba xil lawareegitaanka madaxweynaha cusub Xaruunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya . Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaaliya Prof Max,ed Cismaan.Jawaari ayaa wariyayaasha u sheegay in maalinta Axada ee soo socota Magaalada Muqdisho lagu qaban doono xaflada caleema saarka...
DEG DEG:- Hotelka Muqdisho uu ka deganyahay Madaxweynaha Soomaaliya oo weeraro Ismiidaamin ah lagu qaaday.
Hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lala eegtay Qarax Ismiidaamin ah halkaa oo uu deganyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Qaraxyadaan ayaa waxaa ka dambeeyay rag walxaha Qarxa isku soo xiray, waxaana ay rabeen inay hotelka gudaha u galaan. Halka weerarkaas lagu qaadaayay waxaa ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi ka socday Kenya oo uu hogaaminaayay...
Dibad baxyo lagu taageeraayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay dibad baxyo lagu taageeraayay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Banaanbaxyadana waxaa dhigaayay kumanaan qof oo shacab ah, iyadoona dadka shacabka ah ay sheegeen in ay aad u taageersanyihiin Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha umada Soomaaliyeed. Dadka shacabka ah ayaa socod waxay kusoo mareen meelo...
Kulan sedax geesood ah oo u dhaxeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho ka dhacay.
Waxaa xalay magaalada Muqdisho ka dhacay kulan xasaasi ah oo ay wada qaateen Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxaana kulanka looga hadlay arimo badan. Kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana diiradda lagu saaray arimo...